Chili, kiyi nyowani yekurwisa kufutisa - Afrikhepri Fondation
China, Gunyana 24, 2020
min kuverenga 5 min
Lleptin (kubva kuChigiriki leptos, yakaonda) dzimwe nguva inozivikanwa satiety hormone, iseptic peptide iyo inogadzirisa kuchengetedza kwemafuta mumuviri uye kudya nekudzora manzwiro ekusagadzikana. Hormoni iyi yakavanzika nechena adipose tishu iyo, mukuwedzera kune basa rayo rekuchengetedza nekuunganidza mafuta ane acids, zvakare ine basa rakakosha endocrine. Leptin inonzi peptide hormone, yakagadzirwa ne167 amino acids uye inowanikwa mumakonzo akawanda.
Synthesized ne adipocytes kwete ne endocrine gland, leptin haisi hofisi inonyatsotaura, asi chiito chayo chemhando yehomoni chinoita kuti chikwanise kuchikamuranisa kwakadaro. Iyi ihorm inogadzirisa satiety uye metabolism, nekusunga kune receptor iri pane hypothalamus. Nhamba yeeptin muropa yakananga zvakananga nehutano hwemuviri. Kana isu takadzivirira pamhedzisiro yehormone iyi tinobva tawedzera uremu. Kuramba leptin kunozviratidza iine mukana wakadai sekurwisa insulin, iko kumberi kurudzi rwechipiri chirwere cheshuga. Nekudaro, mhando II chirwere cheshuga imhedzisiro yechikafu chisina kunaka chakapfuma mune shuga nemafuta. Masero anogara achingoputirwa neinishuwarenzi kuti apinza shuga muchitokisi (tsandanyama uye chiropa) uye pakupedzisira anozopokana neinisulin. Izvi zvakafanana anoenda leptin. Sezvo kune huwandu hwakawanda hwemafuta mune munhu ari mubvunzo, iyo leptin inosangana yakanyanya kwazvo. Masero saka anokandwa neptin izvo zvinopedzisira zvave kugadzira kuramba kupokana nehomoni iyi.
Asi zvinopesana ndezvechokwadi. Vanhu vane mafuta akaderera vane hutsika hwakaderera hwe leptin, asi ivo vane hanya zvikuru. Iwe uchangonzwisisa kuti nei chikafu chichiomesesa calorie chinorambidzwa zvachose unbalance yako metabolism. Usambofa wakakanganwa kuti muviri uri muchina unoshandira.
Iyo calorie kurambidzwa inoonekwa sekushushikana kwemuviri nepo kushandisa simba kusingaonekwe nenzira iyi. Nekudaro, nekukura kwazviri kurambidzwa uye kwenguva refu kwazvinogara, ndiko kuwedzera kwemahormoni iwe kwaunozoita semugumisiro.
Chinangwa chekudya zvine hutano uye mararamiro ane hutano. Icho chokwadi chiri nyore chekudya zviri nani saka chine chekuita nehuwandu hwesimba rinopinda. Zvikafu zvine hutano zvinowanzove zvakaderera pamakoriori pane zvinonaka uye nezvikafu zvine mafuta.
Mutambo uye kuenzanisa kudya pamwe nekripiri?
Chinhu chikuru chinoshanda mumuchero wepulpin chinogona kukurumidza kuve chinhu chitsva uye chakakurumbira chekudya chinowedzera nekutenda kwavo kukurudzira metabolism, sekutsvagurwa kwakaitwa timu kubva kuYunivhesiti yeWyoming muUnited States kwakaratidza. Ichi chikamu chinogonesa kupisa mafuta zvisingaite uye nekudaro kurwisa kufutisa.
Iyo pepper inoshandisa capsaicin, molecule inobatsira kurwisana nehuwandu hwekuwedzera uye kurasikirwa nemutoro nyore nyore.
Vatsvagiri vanofunga kuti zvekudya zvinovakirwa pa capsaicin (iwo makemikari aripo mumhiripiri unonzwisa moto) zvinogona kubvisa kudikanwa kwekudzora kudya kwe calorie. Kuita kwechinhu ichi kuri nyore, kunotendera kushandura "mafuta akaipa" kuita zvakanaka brown fats, sekutsanangurwa kwakaitwa nevaongorori panguva yekuratidzwa kwebasa ravo pamusangano wepagore we Biophysical Society muBaltimore, iyo yakapera munaFebruary 11.
Mumuviri medu, chena mafuta maseru anochengetedza simba uye brown maseru emafuta anokonzeresa thermogenic michina (kupisa inogadzirwa na kupisa mafuta) kupisa akachengetedza mafutaanodaro mumwe wevanyori vekudzidza, Vivek Krishnan. Iyo yekuwedzera yezvikafu yakavakirwa capsaicin inobvisa huremu hunowanikwa nekushomeka kwezvikafu zvakapfuma nekukwenenzvera kuvapo kwemaseru brown, ane hunyanzvi hwekuchinja anoita kuti zviite kupisa mafuta pasina simba.
Capsaicin, iyo inobatsira zvikuru inopisa mafuta mumakonzo
dzakawanda studies yakanga yamboratidza kuti masero machena anogona kushanduka kuita brown uye zvinopesana, kazhinji nekuda kwekushisa, asi kutsvagurudzwa kubva kuUniversity yeWyoming kunoratidza kuti capsaicin inoita kuti chena mafuta masero atendeuke brown.
Kuita tsvagurudzo yavo, timu yakakurudzira kudya kwakapfuma kwazvo kwemakonzo pamwe nediki diki re capsaicin (0,01%). Vivek Krishnan nevamwe vake vakazoona kuti mune mamiriro aya mbeva hadzina kuwana huremu nekuti basa ravo re metabolic rakawedzera. Mhedzisiro yaive yakanaka kune dzese nemakonzochete avo vasina chikamu chesawasaini uye vanilloid (inonzi TrpV1) yakawanda.
Chikwata ichi parizvino chiri kushanda mukuvandudza kwechikafu chinowedzera chakavakirwa capsaicin icho chaizorwa nachoobésité. Nhengo dzayo dzinofunga zvikuru uye dzinofunga izvozvo kliniki miedzo devraient rapidement débuter. Les chercheurs ont déjà soumis un projet de brevet de leur méthode pour délivrer la capsaïcine dans le corps.[wpdiscuz-feedback id=”xp9yg2whos” question=”Qu’en pensez-vous ?” opened=”0″][/wpdiscuz-feedback]
CAPSIMAX * 315 mg / 60 makapu .. * Kurema (kupisa mafuta, kutsvedza) * Kugutsikana kana Kudzorera Guarantee * Yakagadzirwa muFrance.
3 nyowani kubva pa29,00 €
Tenga 29,00 €
kubva munaGunyana 23, 2020 2:36 AM
CAPSIMAX 315 mg / 60 makapu
A Thermogen ine simba inopisa mafuta uye simba
Kurera (kupisa mafuta, kutsvedza)
Mhando inotariswa nechitupa chekuongorora
Spirulina - Inovandudza immune system yako
Mavambo emweya wechitendero
[TRIBUNE] ON THE FRANC-CONGOLAIS naCharlie Jephthé Mingiedi Mbala